eHimalaya Online || News from nepal » आजको राशिफल कस्तो रहला तपाइको दिन? जान्नुहोस ।
आजको राशिफल कस्तो रहला तपाइको दिन? जान्नुहोस ।
२०७८ जेठ २१ गते शुक्रबार ०१:३४
मेष:- स्थायी सम्पत्ति कार्यहरूले ठूलो मुनाफा दिन सक्दछन्। रोजगार बढ्नेछ। आयका नयाँ स्रोतहरू उपलब्ध हुन सक्छन्। पदोन्नति को लागी प्रयास सफल हुनेछ। जीवन खुशी हुनेछ। घर बाहिर खुशी हुनेछ। स्वास्थ्यमा राहत हुनेछ। चिन्ता हट्नेछ।...
मेष:- स्थायी सम्पत्ति कार्यहरूले ठूलो मुनाफा दिन सक्दछन्। रोजगार बढ्नेछ। आयका नयाँ स्रोतहरू उपलब्ध हुन सक्छन्। पदोन्नति को लागी प्रयास सफल हुनेछ। जीवन खुशी हुनेछ। घर बाहिर खुशी हुनेछ। स्वास्थ्यमा राहत हुनेछ। चिन्ता हट्नेछ। रोजगार स्थिति बढ्नेछ।
वृष:- पैसा गुमाउने सम्भावना छ। लेनदेनमा हतार नगर्नुहोस्। थकान र कमजोरी हुन सक्छ। व्यापार र व्याबसाय ठिक हुनेछ। काममा शान्ति हुनेछ। यात्रामा रमाईलो हुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा अनुकूलता हुनेछ। राजनीतिक अवरोध हटाएर परिस्थिति अनुकूल हुनेछ। घर बाहिर खुशी हुनेछ।
मिथुन:- यात्रा गर्न हतार नगर्नुहोस्। शारीरिक पीडा सम्भव छ। दीर्घकालीन रोग देखा पर्न सक्छ। सवारी साधन र मेसिनरीको प्रयोगमा सावधान रहनुहोस्। हाँसोमा हल्का नलिनुहोस, सावधान रहनुहोस्। मूल्यवान बस्तु वरिपरि हुन सक्छ, तिनीहरूलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। व्यापार र व्याबसाय ठिक हुनेछ। आयमा निश्चितता हुनेछ ।
कर्कट:- धार्मिक गतिविधिहरूमा चासो हुनेछ। अदालत र सरकारी कामले राम्रो फाइदा दिनेछ। कुनै ठुलो कामको अवरोध हटाइनेछ। नाफाका अवसरहरू आउनेछन्। व्यापार र व्यापार लाभदायक हुनेछ। परिवार समर्थन उपलब्ध हुनेछ। घर बाहिर खुशी हुनेछ। अरूको काममा हस्तक्षेप नगर्नुहोस्।
सिंह:- नयाँ योजना बनाइनेछ। कार्य प्रणालीमा सुधार हुनेछ। तपाईं आदर पाउनुहुनेछ। आयका नयाँ स्रोतहरू पाउन सकिन्छ। व्यापारमा अनुकूल लाभ हुनेछ। त्यहाँ सेयर मार्केट आदि बाट नाफा हुन्छ। प्रेम मामिलामा हतार नगर्नुहोस्। काममा थकान हुनेछ। केहि कामको बारेमा चिन्ता रहनेछ ।
कन्या:- बक्यौता रकम को लागी प्रयास सफल हुनेछ। व्यापार यात्रा सफल हुनेछ। नाफाका अवसरहरू आउनेछन्। व्यापार र व्यबसाय लाभदायक हुनेछ। काममा अनुकूलता हुनेछ। भाग्यले साथ दिनेछ । केही ठूलो काम गर्ने इच्छा जागृत हुनेछ। चिन्ता र तनाव रहनेछ। परीक्षामा नपर्नुहोस्
तुला:- अप्रत्याशित खर्चहरू आउनेछन्। विवादले आत्मसम्मानलाई ठेस पुर्याउन सक्छ। दीर्घकालीन रोग देखा पर्न सक्छ। जोखिमपूर्ण र संपार्श्विक कामबाट बच्नुहोस्। अपरिचित व्यक्तिको शब्दमा नपर्नुहोस्। व्यापार ठीक हुनेछ। आयमा निश्चितता हुनेछ।
बृश्चिक:- त्यहाँ अप्रत्याशित लाभहरू हुन सक्छन्। रोजगारी पाउन प्रयासहरू सफल हुन्छन्। जागिरको हकमा वृद्धि हुन सक्छ। व्यापार यात्रा सफल हुनेछ। लगानी अनुकूल हुनेछ। घर बाहिर खुशीको वातावरण हुनेछ। केहि कामको बारेमा चिन्ता हुनेछ। शारीरिक पीडा सम्भव छ।
धनु:- टाढाबाट राम्रो समाचार प्राप्त हुनेछ। आत्मविश्वास बढ्नेछ। जोखिम लिन साहस छ। पाहुनाहरू घरमा आउनेछन्। खुशी र उत्साह रहनेछ। व्यापार-व्यवसाय अनुकूल फाइदा दिनेछ। अल्छी हुनेछ। विवेक प्रयोग गर्नुहोस्।
मकर:- प्रयासहरू सफल हुनेछन्। शक्ति बढ्नेछ। तपाईलाई सामाजिक कार्य गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। तपाईं आदर पाउनुहुनेछ। व्यापार बढ्नेछ। लगानी राम्रो हुनेछ। काममा कामको कदर गरिनेछ। आय बढ्नेछ। कुनै हतार नगर्नुहोस। प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ। फाइदा हुन्छ।
कुम्भ:- दु:खद समाचार प्राप्त गर्न सकिन्छ। बोलीमा हल्का शब्दहरू प्रयोग नगर्नुहोस्। क्रोध र उत्साहलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्। दीर्घकालीन रोग देखा पर्न सक्छ। आफूसँग बहुमूल्य चीजहरू सुरक्षीत राख्नुहोस्। काममा भने जस्तो मन लाग्दैन। अरूले तपाईबाट अधिक अपेक्षा गर्नेछन्, व्यवसायमा लाभदायक हुनेछ।
मीन:- पार्टी र पिकनिक कार्यक्रम गर्न सकिन्छ। स्वादिष्ट खानाको आनन्द मिल्नेछ। विद्यार्थी वर्ग सफलता प्राप्त गर्नेछ। व्यापार बढ्नेछ। आयका नयाँ स्रोतहरू पाउन सकिन्छ। काममा कामको कदर गरिनेछ। नयाँ विचारहरू दिमागमा आउनेछन्। भाग्यले समर्थन गर्दछ। आय हुनेछ।
प्रकाशित मिति २०७८ जेठ २१ गते शुक्रबार ०१:३४